Imaammata Mateenyaa - Meta
←Imaammataa fi qajeeltoowwan Imaammata Mateenyaa
Imaammanni Mateenyaa Dhaabbata Wikimiidiyaa faayidaan isaa akkamiin walitti akka qabnu, fayyadama fi odeeffannoo dhuunfaa kee qoodnu dha. Dirree Wikimiidiyaa irratti, Imaammata kana duukaa walii galuu keetii.
1.1.2 Imaammanni Mateenyaa kun Waantoota Akkamiif Uwwisa kenna
Kun hiikkaa afaaniiti Hiikkaa beekamtii qabuuf galmee argachuuf maaloo Afaan Ingiliffaa duroo ilaalaa.
Imaammanni kun akkamiin akka fayyadamnu, fi odeeffannoo dhuunfaa qooduu dha.
Odeeffannoo kee dabarsinee nama sadaffaatti hin kireessinu ykn hin gurguru.
Imaammanni Mateenyaa kun Waantoota Akkamiif Uwwisa kenna
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Privacy_policy/om&oldid=22191416"
Last edited on 15 October 2021, at 08:46